Vaovao - Ny teknolojia RFID dia nanatsara ny haavon'ny fitantanana ny indostrian'ny fanasana
Ny teknolojia RFID dia nanatsara ny haavon'ny fitantanana ny indostrian'ny fanasana
Araka ny fantatsika rehetra, ny fampiharana ny RFID eo amin'ny indostrian'ny akanjo dia nanjary tena mahazatra, ary afaka mitondra fanatsarana lehibe amin'ny lafiny maro, ka mahatonga ny indostrian'ny fitantanana nomerika iray nihatsara be. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny indostrian'ny fanasan-damba, izay tena akaiky ny indostrian'ny akanjo, dia nahita ihany koa fa ny fampiharana ny teknolojia RFID dia afaka mitondra tombontsoa maro.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny indostrian'ny fanasan-damba, ny asa fitantanana ny angona dia atao amin'ny tanana. Noho izany, matetika dia tsy misy porofo momba ny fahamarinan'ny fanisana, ny fanaraha-maso ny faharetan'ny fanasan-damba, ny isan'ny fitsaboana fandotoana mavesatra, ary ny fahaverezan'ny rongony. Azo arahana izany ary mitondra fahasahiranana maro ho an'ny fitantanana rongony.
Alohan'ny hanasana ny lamba rongony, ny orinasa fanasan-damba dia mila mahatsapa ny fitsaboana fanasokajiana araka ny loko, ny tora-kofehy, ny sokajy fampiasana ary ny sokajy loto. Ny fanodinana amin'ny tanana matetika dia mitaky olona 2 ~ 8 handany ora maromaro handaminana lamba rongony samihafa amin'ny chutes samihafa, izay mandany fotoana be.
Fanampin'izany, ny fomba fitantanana ny fatiantoka amin'ny rohy fanaraha-maso ny lozisialy, ny fomba fitsabahana rehefa lehibe na kely ny isan'ny fanomezana; ny fomba fanaraha-maso ny tahan'ny fandotoana mavesatra, ny fitakiana, ny fanaraha-maso ny vatana vahiny, ary ny fanaraha-maso ny fanararaotana amin'ny rohy fanaraha-maso rongony; ny fomba fanaraha-maso ny asa fanasan-damba, ny sata famokarana ary ny lamba ao amin'ny rohy fitantanana nomerika Ny fanaraha-maso ny fahaverezan'ny ahitra sy ny faharetana, ny tahan'ny fampiasana rongony, ny fanisana hotely sy ny fanaraha-maso ny lamba rongony zombie, sns.
Azo lazaina fa nitondra fiovana vaovao ho an'ny indostrian'ny fanasan-damba ny teknolojia RFID. Ny marika fanasan-damba RFID dia afaka manampy amin'ny famantarana ny fotoana fanasan-damba, ny fepetra fanasan-damba, ny fampahalalana momba ny mpanjifa ary ny fatran'ny fanasan'ny zavatra voarakitra an-tsoratra, ny fampihenana ny taham-pahadisoana amin'ny fotoana fiasan'ny tanana mahazatra, ary ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitantanana.
Na izany aza, amin'ny fampiharana azo ampiharina dia misy ihany koa ny fahasarotana sasany, ao anatin'izany ny lamba, ny fametahana marika sy ny fiondrika, ny hamandoana, ny mari-pana ary ny antony maro hafa izay hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny famakiana ny marika. Na izany aza, mba hiatrehana tsara kokoa ireo fanamby, ny mpanamboatra RFID dia namolavola moramora RFID marika fanasan-damba tsy voatenona, RFID bokotra fanasan-damba tags, marika fanasan-damba vita amin'ny silicone sy marika maro hafa, izay mety amin'ny fitaovana rongony samihafa, ny mari-pana fanasan-damba ary ny fomba fanasan-damba.
Azo lazaina fa nitondra fiovana vaovao ho an'ny indostrian'ny fanasan-damba ny teknolojia RFID. Fanasan-damba RFID tags dia afaka manampy hamantatra ny fotoana fanasan-damba, fanasan-damba fepetra, mpanjifa vaovao sy ny fanasana matetika ny zavatra voarakitra, hampihenana ny fahadisoana taham-pahafatesan'ny boky fampianarana ny fotoana, ary tena manatsara ny fitantanana mahomby.
Na izany aza, amin'ny fampiharana azo ampiharina dia misy ihany koa ny fahasarotana sasany, ao anatin'izany ny lamba, ny fametahana marika sy ny fiondrika, ny hamandoana, ny mari-pana ary ny antony maro hafa izay hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny famakiana ny marika. Na izany aza, mba hiatrehana tsara kokoa ireo fanamby, ny mpanamboatra RFID dia nanamboatra marika fanasan-damba tsy voatenona, bokotra fanasan-damba, marika fanasan-damba silicone ary marika maromaro hafa, izay mety amin'ny fitaovana rongony samihafa, ny mari-pana fanasana ary ny fomba fanasana.